ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ - Hello Sayarwon
ခေါင်းကိုက်တာက သာမန် အချိန်မှာ ပြောတော့သာ ခပ်ပေါ့ပေါ့နော်။ ခေါင်းတကယ် ကိုက်နေချိန်မှာ ခေါင်းကိုက် တယ်လို့ ပြောရတာက အတော်လေး ခံစားရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။
ခေါင်းကိုက်တာက နေ့စဉ် ဘဝမှာ အချိန်မရွေး ခံစားရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာပါ။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်း ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ခေါင်းကိုက်တာကို နေ့စဉ် လိုလို ခံစားနေရပြီဆိုရင် တစ်ခုခု မှားယွင်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘာကြောင့် ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်ရတာလဲဆိုတာကို အတူတူ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာက ခေါင်းထဲမှာနေရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပါ။ ဦးရေပြား၊ Sinuses နဲ့ ဇက်တဝိုက်မှာခံစားရတဲ့ သက်သောင့်သက်သာမရှိတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ပေါ့။ ခေါင်းတဝိုက်က ကြွက်သားတွေ နာသလိုမျိုးလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားလွန်းတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ နာကျင်မှုကိုအာရုံခံတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ပြဿနာရှိနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ တစ်ခုမကပါဘူး။
ကဖင်း နဲ့ အယ်လ်ကိုဟောများသွားတာ၊
ခေါင်းကိုက်တာက တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ဆိုရင် ပုံမှန်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အခုလို အချက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဖျားရှိနေတာ၊ အအေးမိတာတွေကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဖျားရှိတဲ့အခါ သွေးပေါင်ချိန် တက်တာ၊ ကိုယ်တွင်းမှာ ရေဓာတ် နည်းတာတွေကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာ အထူးသဖြင့် လည်ပင်း နဲ့ ဇက်ကြောတဝိုက်က ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာက ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါ။
ကွန်ပျူတာ တစ်ချိန်လုံး ကြည့်နေရသူတွေ၊ ဖုန်း အသုံးများတဲ့သူတွေမှာ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ် နည်းနေတဲ့အခါ ဇက်တဝိုက်နဲ့ လည်ပင်းက ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းပြီး ခေါင်းကိုက်တာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ရေသောက်နည်းမယ် ရာသီဥတု ပူနွေးစိုစွတ်တာကြောင့် ချွေးထွက် များမယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ် နည်းနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်း ခဏခဏ ကိုက်ရတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်ကတော့ သွေးတိုးတာပါ။ သွေးတိုးတဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဇက်ကြောတက်တာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်တာနဲ့အတူ နားထင်နားက သွေးကြောလေးက တဒုတ်ဒုတ် ခုန်နေပြီဆိုရင်တော့ သွေးပေါင်ချိန်ကြည့်ဖို့ လိုပါပြီ။
ကိုယ်တွင်းမှာ ဟော်မုန်း ပြောင်းလဲတာကြောင့်လည်း ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဓိက ဇာတ်လိုက်တွေ ဖြစ်တဲ့ serotonin နဲ့ estrogen ဟော်မုန်းတွေ ပြောင်းလဲမှုက ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို အစပျိုး စေနိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်း အတက်အကျ ကလည်း ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းဆိုတာ မေ့မထားပါနဲ့။
စိတ်ညစ်စရာတွေကို သိမ်းထားတတ်သူတွေ သာမန် အခြေအနေ အသေးအဖွဲလေးတွေကိုကအစ လိုက်ပြီး စိတ်ဖိစီးတတ်သူတွေက ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏခဏ ခေါင်းကိုက်နေပြီဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သိမ်းထားမိပြီလားဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် ဆန်းစစ်ပြီး ရှင်းထုတ် လိုက်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
စိတ်ဖိစီးမှု များတဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သက်သာစေဖို့ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ၊ ဝင်လေထွက်လေ မှတ်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။ ယောဂလေ့ကျင့်ပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ခေါင်းခဏခဏ ကိုက်တတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ ……… ကိုယ်တိုင်ရော အဖြေထွက်ပြီလား ………..
Are Your Daily HeadachesaSign of Something More Serious? https://www.keckmedicine.org/are-daily-headaches-something-serious/ Accessed Date3November 2021
Why Do I Get Frequent Headaches? https://www.scripps.org/news_items/3239-why-do-i-get-frequent-headaches Accessed Date3November 2021
Having Constant Headaches? What You Need to Know https://www.healthline.com/health/constant-headache Accessed Date3November 2021
ခေါင်းကိုက်နေရင် ဘာတွေ သောက်မလဲ။